Mpitsara ny firenena iray manontolo - Raby Michael Avraham
Mpitsara ny firenena iray manontolo
Responsa > Sokajy:Môraly > Mpitsara ny firenena iray manontolo
Ofer Nanontany 3 taona lasa izay
Ahoana no nahatakaran’ny raby ilay fanontanian’i Abrahama hoe ‘tsy hanao ny rariny ny mpitsara ny tany rehetra’? Mamatotra ve ny fitondran-tena raha tsy misy ny kibo? Ary raha tsy izany, raha ny fitondran-tena dia zavatra tsy maintsy atao raha tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, ary raha tsy misy izany dia tsy misy dikany ny adidy ara-moraly, ahoana no 'hanontaniana' an'Andriamanitra ny amin'ny tsy fanekeny ny fitondran-tena?
mikyab Staff Namaly 3 taona lasa izay
Inona no olana? Na dia tsy mifatotra amin’ny herin’Andriamanitra fotsiny aza ny fitondran-tena, dia nanontany azy momba ny tsy fitovian-kevitra i Abrahama.
Ny mpanelanelana farany Namaly 3 taona lasa izay
Tsy fantatr’i Abrahama fa miresaka amin’Andriamanitra izy.
Takany tokoa fa miresaka amin’ny olona manana fahaizana sy tonga hanao ny rariny izy. Noho izany dia miezaka manodinkodina amin'ny alalan'ny fandokafana izy amin'ny fampifangaroana ny famaritana izay tokony hatao.
David Siegel Namaly 3 taona lasa izay
Inona no dikan’ny hoe tsy mahafantatra fa miresaka amin’Andriamanitra izy?
Ary misy olona telo mijoro eo amboniny, H. ny iray ary tsy fantany nandritra ny hetsika
Ny Torah dia milaza amintsika fa Jehovah sy ny teniny ao anatiny nefa tsy fantatr'i Abrahama.
Ka mety ho tonga nofo tao amin'i Jesosy ve Andriamanitra ??
Raha mahita bibilava mamitaka olona sy ampondra miteny ianao dia mety hisy na inona na inona.